> Resource > Lugood > Sidee si ay u gudbiyaan iPod playlist in Lugood
Si jiriin ah music, iPod aad u weyn yahay in ay si fudud ku raaxaysan karaan music by syncing music iyo playlist ka Lugood maktabadda si ay iPod. Si kastaba ha ahaatee, ma aha sida fud sida ay u gudbiyaan iPod playlist in Lugood. Si looga hortago in burcad badeeda, Apple ma ha ma aad samayn in. Sidaa darteed, marka aad si lama filaan ah lumiso playlist Lugood, waxaa laga yaabaa inaad ka soo gaartay ee ku saabsan waxa la sameeyo.
Marna ha ku odhan dhinto! Waxaad si Lugood dhaqaajin karin iPod playlist effortlessly, ilaa iyo inta aad qabto kala iibsiga ah iPod in Lugood. Halkan waa xal wanaagsan idiin - Wondershare TunesGo (dadka isticmaala Windows) ama Wondershare TunesGo (Mac) . Tani codsiga iPod in Lugood kala iibsiga gelineya inaad u guurto playlist ka iPod maktabadda Lugood si fudud oo dhaqso, iyo qeybsanaan. Intaa waxaa dheer, codsigan xitaa kuu ogolaanaysaa inaad ku wareejiso dib iPod playlist si aad u computer sidoo kale.
Tallaabooyinka fudud in aad nuqulka iPod playlist in Lugood
Hagaha soo socda waxay ku saabsan tahay playlist dayanayaan ka iPod maktabadda Lugood on your computer socda nidaamka ka hawlgala Windows. Hadda, download this kala iibsiga iPod in Lugood codsiga on your computer. Markaas hubi hagaha nala.
Tallaabada 1. Orod codsigan iyo xirmaan iPod la your computer
Si aad u bilaabaan oo leh, rakibi this iPod in Lugood kala iibsiga on your computer. Markaasaa waxaa u ordo. Isticmaal cable USB ah in ay ku xidhmaan aad iPod la your computer. Marka ay ku xiran tahay, codsigan ugu dhakhsaha badan lagu ogaan doonaa iPod. Markaasay aad iPod lagu soo bandhigi doonaa suuqa kala hoose. Waxaad ka arki kartaa warbaahinta, sawiro, iyo xiriirada oo dheeraad ah oo ku saabsan ka column ka tagay.
Tallaabada 2. nidaameed iPod playlist in Lugood
Markaas, khaanadda bidix, riix "playlist" button inay soo qaadaan suuqa kala playlist dhinaca midig. Raadi iyo hubiyo playlist doonayo. Riix saddexagalka rogay hoos "Dhoofinta in" badhanka. Markaas, kala iibsiga playlist bilaabmin. Inta lagu jiro kala iibsiga, waxaa idinku waajib ah in aan barkinta aad iPod.
Fiiro gaar ah: codsiga Tani waa la jaan qaada iPod taabto, nano iPod, shaandheeyn lagu iPod iyo classic iPod. The version Mac ma taageeri iPod xiriiri 3. Labada qeybood oo si buuxda u taageeraan macruufka 9/8/7/6/5. Riix Tech Spec si aad u hesho info badan oo ku saabsan taageeray daydo iPod.
Taasi waxa ay samaysay! Waxaad dhoofiyo playlist ka iPod maktabadda Lugood. Fur Lugood si aad u hubiso playlist laga dhoofiyey. Markaas, waxaad ka heli doontaa songs ee playlist waa la ratings, play dacwadood iyo macluumaad dheeraad ah, oo kuu ogolaanaysaa inaad si deg deg ah ka heli heeso aad doonayay.
Marka laga reebo dhoofinta iPod playlist in Lugood, waxaad kaliya kara dhoofin heeso aad jeceshahay dib ugu maktabadda Lugood aan tus sidoo. Ka sokow, codsigan ayaa sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad la abuuro playlist oo cusub ku iPod. Sidaas darteed, sababta aan kala soo bixi codsigan iPod in Lugood kala iibsiga in ay isku dayaan naftaada? Waxaad ka heli doontaa muuqaalada fantastik ah oo waxtar leh oo dheeraad ah.
Video Tutorial u beddelashada iPod Playlists in Lugood